Maninona no manamboatra miaraka amin'ny Createproto? - Createproto Tech Co., Ltd.
MOMBA ANAY / Nahoana no Createproto
Manafaingana ny fampandrosoana ny vokatra, mampihena ny vidiny ary manatsara ny rojom-bary
Izahay no loharanom-pamokarana nomerika haingam-pandeha indrindra eto an-tany ho an'ny prototypes haingana sy ny faritra famokarana on-demand. Ny rafitra mitanisa sy manonta mandeha ho azy dia ahafahantsika mamokatra plastika, vy, ary faritra vita amin'ny silika vita amin'ny solika ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ny vokany? Mpiara-miasa iray amin'ny famokarana izay manampy anao hanafainganana ny hafainganana amin'ny tsena sy hitantana stratejika ny fitakiana manerana ny tsingerin'ny fiainam-bokatra iray manontolo.
Asa miasa any
Ny mpanjifa dia nanompo
Serivisy matihanina avy amina ekipa mpivarotra teknika afaka miresaka amin'ny teny anglisy ary mijery hatrany ny antsipiriany rehetra ilainao, ary mifandray aminao mba tsy hisy hahagaga ny traikefan'ny mpanjifanao.
Ambany noho ny vidin'ny US / EU
Valiny haingana ao anatiny
Ekipa natokana ho an'ny ekipa izay mahatakatra fananana, teknolojia fanodinana ary fanandramana injeniera ary manome vahaolana mahomby ary fanohanana sy torohevitra mitohy avy amin'ny fifandraisana mpivarotra voatondro.
Tohana ny tetik'asa fampandrosoana
5.000+ hatreto aloha
Manana ekipa injeniera matihanina, masinista ary mpanao asa-tanana mahay izahay izay manana traikefa mihoatra ny 15 taona, izay ahafahantsika mahatakatra tsara ny fepetra takian'ny tetik'asa marina avy amin'ny prototype ka hatramin'ny famokarana.
Fanamboarana modely Prototype
Mpiara-miasa atokisana izahay, mahafantatra ny fomba hanamboarana faritra mitovy amin'ny famaritana nangatahan'ny mpanjifa, ary mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fandefasana fotoana. Ao amin'ny CreateProto dia milaza izay ataontsika izahay ary manao izay lazainay.
Ny fandeferana mafy indrindra
+/- 0,001 "hatramin'ny +/- 0,0002"
(+/- 0.025mm mankany +/- 0.005mm)
Dingana taorian'ny famaranana
Izahay dia namolavola rafitra fikirakirana mahomby, marina ary mahomby amin'ny fandefasana valiny ambony, ary afaka manome fijanonana an-tampony hainganana izay hanampy anao hiatrika ireo fanamby sarotra amin'ny famokarana.
“Mpiara-miasa lehibe i CreateProto satria ahafahanay mivoatra sy miverina amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa. Indraindray, izahay dia mampiasa ny CreateProto ho toy ny mpanamboatra ho an'ny singa voatondro mandritra ny androm-piainan'ny tetikasa satria tena tsara izy ireo ny miara-miasa. ”
Prototyping haingana, Cnc Prototyping, Prototyping haingana sy famokarana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Cnc Prototyping haingana, Prototyping haingana,